११ दिनमा कोरोना निको हुने औषधि प्रयोगका लागि अमेरिकाको स्वीकृति
कोरवासिङ्गटन, २० वैशाख । कोरोना महामारीले संसारलाई नै त्राहिमाम बनाइरहेको बेला अमेरिकाबाट खुसीको खबर सार्वजनिक भएको छ । त्यहाँको खाद्य तथा औषधि प्रशासन एफडीएले कोभिड-१९ विरुद्धको रेम्डिसिभियर नामक औषधि प्रयोगलाई आपतकालीन अनुमति दिएको छ । यो औषधि कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेका बिरामीका लागि मात्र प्रयोग अनुमति दिइएको हो ।
क्लिनिकल अध्ययनको प्रारम्भिक परिणामले कोरोना संक्रमितहरु यो औषधि सेवनपछि छिट्टै निको भएको पाइएपछि एफडीएले औषधि प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो । यो एकप्रकारको एन्टीभाइरल विरुद्धको औषधि हो, जसलाई कोरोनाविरुद्ध अहिलेसम्म सबैभन्दा प्रभावकारी औषधि मानिएको छ ।
एफडीएका कमिश्नर स्टेफन हानका अनुसार कोभिड-१९ का अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरुका लागि औषधि उपलब्ध हुनेछ । यसअघि नेशनल एन्स्टीच्युट अफ हेल्थको क्लिनिकल परीक्षणबाट उत्साहजनक परिणाम आएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि एफडीएले औषधि प्रयोगका लागि आपतकालीन अनुमति दिएको हो ।
खाद्य तथा औषधि प्रशासन एफडीए यसअघि कोरोनाविरुद्ध मलेरियाको औषधी क्लोरोक्वीन र हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीनलाई आपतकालिन रुपमा प्रयोगका लागि अनुमति दिएपछि पछि यो औषधिको प्रयोगबाट बिरामीको मुटुको चालको समस्यादेखिएको थियो ।
क्लिनिकल परीक्षणमा पछिल्लो औषधिको प्रयोगबाट बिरामीहरु ११ दिनमा नै निको भएको नेशनल एन्स्टीच्युट अफ एलर्जी एण्ड इन्फेक्सियस डिजिजको अध्ययनले देखाएको छ । यो औषधि प्रयोग नगरेका बिरामीहरु निको हुन १५ दिन लागेको पाइएको थियो भने औषधि प्रयोग गर्नेहरु ४ दिन अगाडि नै निको भएको अनुसन्धानबाट भेटिएको छ ।
औषधि उत्पादनकर्ता कम्पनीले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा यो औषधिको कम्तिमा ५ दिनको डोज प्रयोग गरेका ५० प्रतिशत बिरामीमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । यो औषधिको क्लिनिकल परिक्षण कोरोनाबाट संक्रमित भएका गम्भीर ३९७ बिरामीहरुमा गरिएको थियो ।
सार्वजनिकरुपमा प्रयोगका लागि यो औषधिको ५ वा १० दिनको डोज तयार पारिने कम्पनिले जनाएको छ । यसको उत्पादनका लागि गरिएको अध्ययनमा अहिलेसम्म ५० मिलियन डलर खर्च भइसकेको छ ।
कम्पनीले मे महिनाको अन्त्यसम्ममा डेढलाखभन्दा बढी १० दिने डोजका औषधीहरु उत्पादन गर्न सक्ने जानकारी दिएको छ । हालका लागि भने यो औषधि आईभीमार्फत् अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई मात्र दिन सकिने कम्पनिले जनाएको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिको संख्या ७६ हजार नाघ्यो
नेपालको नयाँ नक्सा समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको भन्दै नेविसंघको विरोध
डा. केसीको समर्थनमा कपिलवस्तुमा धर्ना
१५ दिनदेखि अनसनरत डा. केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै
अब पाँच डलरमै कोरोना परीक्षण